Talo khabiir ah oo ka socota Kacaanka si aad u ilaaliso Website-ka WordPress ka soo jeeda dambiyada dambiyada
Amaanka WordPress waxaa badanaa lagu magacaabaa "adag". Xitaa marka aadan ogeyn sida loo hagaajiyogaadiidkaaga internetka, waxaa muhiim ah in aad hubiso aqoonsigaaga boggaaga. Mana aha khalad in la yiraahdo malaayiin bilyan oo bog internet ahwaxaa ku shaqeeya Blogger ama WordPress.
Nik Chaykovskiy, The Sare Maareeyaha Guusha ee Macaamiisha, ayaa sheegay in WordPress uu yahay midka ugu caansan iyo adeegsiga user-saaxiibtinimo. Nidaamkan maareynta maadada waa mid fara badanfaa'iidooyinka iyo faa'iido darrada - logiciel planificateur taches. Tusaale ahaan, haddii aanad keydka sir ka dhigin, waxaad waayi kartaa aqoonsigaaga iyo helitaanka shabakadaada.Halkan waxaa ku qoran talooyin ku saabsan sidaad u difaaci lahayd boggaaga WordPress ka soo jeeda.
Dib u soo celiya Website-kaaga Inta badan
Joogtada ah ee kaydka WordPress waa mid ka mid ah mowduucyada ugu-doodaha ee maalmahan.Waa muhiim in boggaaga WordPress uu si sax ah u soo celiyo. Waa inaad sameysaa hal jeer ama laba jeer toddobaadkii si aad u sugto ammaanka iyo ammaanka internetka.Si kastaba ha ahaatee, kaydka maalin kasta, waxaa si weyn loogu talinayaa maaddaama ay ka ilaaliso website-kaaga ka yimaada tuugada iyo weerarada khatarta ah. Waxaa jira fara badanPlugins WordPress oo laga yaabo inay kaa caawiso dib u celin, laakiin BackupBuddy waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waxay kugu kici doontaa adiga oo aan ka badnayn $ 100 oo soo celin karablog ama shabakad la jabsaday oo kaliya waxoogaa ilbiriqsi ah. Diyaar! Backup waa plugin ku habboon kuwa doonaya barnaamijka WordPress oo bilaash ah.Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid nuqul dib u habeyn ah, wareejinta faylashaada Dropbox, oo dib u soo celi xogtaada marnaba..Doorashada saddexaad waa UpdraftPlus.Waa ficil iskudhaf ah oo ku haboon user-ka.
Xakamee Isku Diiwaangalinta Soodhaweynta
Waqti ka waqti, hackers isku dayaan in ay jebiyaan bogaggaaga WordPress by qiyaaso aadfurayaasha. Taasi waa sababta aad u xaddidid isku-day galabnimada isku-dayga si aad ugu badbaado internetka. By default, WordPress ayaa kuu ogolaaneysa inaad isticmaasho furaha kala duwan,taas oo ujeedadeedu tahay in macluumaadkaaga la ilaaliyo amaan iyo ammaan. Waa inaad ku dartaa lakabka dheeraad ah ee boggaaga internetka adiga oo yareynaya helitaanka labada ilaasadex jeer. Haddii ay dhacdo, qof ayaa isku dayey inuu galo lambarka sirta ah, boggaaga ayaa la xirayaa, laakiin xogta way sii ahaan doontaa mid amaan ah. Waxaa jira atiro badan oo ah plug-yahannada WordPress, sida Limit Log In Attendeys. Taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad xaddido tirada isku daygii ku guul daraystay. Adiga oo isticmaalaya plugin this, adigaayaa sidoo kale xakameyn kara IP-yada badan, laakiin waa muhiim inaad xasuusato eraygaaga sirta ah. Oo haddii keeytiyayaashu ay isticmaalaan wakiilada kala duwan, plugin thissi toos ah u xakameynaya dhammaantood si aad u ilaaliso boggaaga internetka. Dhammaan kala doorashadeeda waa kuwo la gaari karo oo la isticmaali karo. Waad xiri kartaa IP si ku meel gaar ah amasi joogto ah.
Ha isticmaalin "admin" sida magacaaga
Mid ka mid ah qaladaadka ugu wayn ee dadku sameeyaan waa inay isticmaalaan "admin" magacooda magacooda.Waa inaadan sidaa samayn haddii aad rabto inaad boggaaga WordPress ku kaydiso ammaan iyo ammaan. Kootooyinka la isku xiro waxay inta badan galaan boggaga internetka iyagoo isticmaalaya ereyganqiyaas ereyada sirta ah marnaba. Waxaa jira fursado khabiiro khatar ah ay uga faa'iideysan doonaan macluumaadkaaga qarsoodiga, xogta bogagga, iyo waxyaabo kale oo isticmaalaya tanusername. Haddii aad rabto inaad ilaaliso goobtaada ammaan, ka dibna waa muhiim inaadan "marin" isticmaalin magacaaga asaasiga ah. Halkii, waa inaaddooro magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah, taas oo aan macquul aheyn in qof kasta uu ku guursado.